घट्यो म्याग्दीको जनसंख्या, कुन पालिकामा कति ? – धौलागिरी खबर
घट्यो म्याग्दीको जनसंख्या, कुन पालिकामा कति ?
धौलागिरी खबर	 २०७८ माघ १२, बुधबार २१:३८ गते मा प्रकाशित 1,057 0
बेनीको खुल्लामञ्चमा हालै भएको एक आमसभामा सहभागी सर्बसाधारणहरु । फाइल तस्बिर धौलागिरी खबर
२०७८ कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म देशभर १२ औ जनगणना भएको थियो । म्याग्दीमा १८६ जना गणक र ४७ जना सुपरीबेक्षकहरु जनगणनामा परिचालन भएका थिए । संघीय ब्यवस्था लागू भएपछि पहिलो पटक जनणना भएको हो ।